Date My Pet » Mapuraneti anogona kufanoona sei Your Love Destiny
Last updated: Sep. 19 2020 | 3 Maminitsi verenga
In hwenyeredzi, pane chinhu anonzi Natal chati. Zviri ndezvaJosephus ane Snapshot pakati chaiyo nzvimbo nyeredzi dzose nemapuraneti nezvimwe miviri yokudenga vari pakuzvarwa kwenyu kubva nzvimbo iwe vakaberekerwa. Zvakafanana mepu, wakatambanudza unhu hwako uye kuratidza zvaunoda / vanofanira akasiyana-siyana oushumiri hwako. Munhu wose anoziva kuti Venus ndiye nyika rudo, uye chiratidzo ari munzvimbo paakaberekwa wako anogona kupa kunzwisisa zvaunoda murudo. Ko Venus wako pamusoro pako? (Kana uchida kuwana kwenyu Venus chiratidzo, tinya pano).
Venus muna yechinguva: Unofanira munhu anogona kukutadzisa kufarira, kana iwe kutama kutsanya. Vanofanira kunowirirana yenyu chido, uye uve nechido nezvoupenyu. Unogona vakawanda zvinogona suitors, asi iwe enda kuburikidza navo kurumidzai kana usiri nezvezvandaifanira zvaunoda. Unofanira kuwana kare zvikuru kudiwa nguva dzose kuva itsva kunzwa.
Venus muna Taurus: Imi munodazve mumwe munhu akatsiga uye mutoro. Kana vari mhuka uye sechisina musoro, uri vachimhanya rimwe nzira. Uchizoda munhu anokanganisa uve nezvishoma, Muumbi agobudisirwa hari zvinhu muupenyu, uye munhu angakwanisa kwako nyama hunhu. Iwe tora nguva yako pakusarudza shamwari, uye zvinoda zvachose kuzvipira. Watch nokuti zvakare possessive kana godo.
Venus muna Gemini: Unofanira mupfungwa kubwaira kupfuura zvimwe zvose. Kana usingagoni kuva kukurukura zvakanaka munhu, uchaita dzungaira. Unofanira munhu unofadza, nevakadzidza mhando, asi uyo zvakawanda makateyiwa kukupfuura saka vanogona kudzikama iwe uye Corral iwe. Unogona kuenda munhu muduku kupfuura iwe, kana anoita muduku kupfuura zvadziri.
Venus muna Cancer: Unofanira nepedyo nemunhu kupfuura zvimwe zvose. Unoda nomumwe anogona kuzarura kwamuri mupfungwa, kutsigira uye kukukurudzira, asi ndichakubvunzaiwo kukutsausa kunze aunenge wajaira. Relationships vanogona kuwana pakunzwa kana musingadi kutora mikana nomumwe wako ose saka kazhinji. Watch nokuti muitiro kuti uve mubereki ari ukama.
Venus muna Leo: Unofanira kuva nyeredzi iri ukama, saka uchida shamwari ndiani achakupai kunyatsotarisira uye arumbidze unofanira. Unogona kuva zvishoma udyire nguva murudo, asi imi muri inodziya uye wakazadzwa uyewo, uye zvinoshamisa vakavimbika. Dzaunoda rudo kufanana chinhu kubva rwaunofarira dzorudo yokufungidzira kana firimu, uye tiri kudanana chaizvo.
Venus muna Virgo: Unofanira munhu anoshanda uye mutoro, uye ndiani regai iwe tora nguva yako. Haudi kumhanya kana pakusarudza munhu kuti ave, uye vanoda kuva nechokwadi chokuti zvakanaka kutanga. Unogona kuva zvishoma nyara murudo, uye vangada kuti kutanga. Unoda shamwari anogona kunyevenutsa tsinga dzako kana muchifunganya pamusoro ukama.
Venus muna Libra: Unofanira munhu anotora kuzvipira zvakakomba, nokuti chokwadi kuita. Panguva imwe, unofanira kuva tichatombozvidyawo nzvimbo muukama kukura, uye uchida munhu anonzwisisa kuti ukama anongogona nani. Unokoshesa dzorudo uye chivalry, uye tinoda kubatwa noruremekedzo uye somunhu wakaenzana.
Venus muna Scorpio: Unofanira munhu wakazadzwa asi ndiani kubata umbirimi yako, nokuti unogona kuva zvawandisa panguva murudo. Unogona vharidzira kana kunamatira mudiwa wako, kuita kudzora kana konzera navo, saka zvakakosha kuti kushanda kuti asati kuva nemunhu kana zvauchasangana vanopedzisira vasisavadi. Uri mwoyo vanhu simba vanoratidzika simba.
Venus muna Sagittarius: Unofanira mumwe munhu zvarisingazivi, oneka, uye anogona kuseka nemi. Haufaniri kutora rudo kuzvikoshesa, saka unoda mumwe munhu zvakawanda zvinoshanda nerudo, handingakuregi iwe arasika yakawandisa. Unoda akwirwe chaiko nemunhu, uye vanofanira kuyeuka imwe mupfungwa munhu anokosha kwazvo zvokusafanira. nzvimbo iyi inogona kuratidza kusingaperi tsvimborume / bachelorette.
Venus muna Capricorn: Imi munodazve mumwe munhu akura, mutoro, uye zvishoma tsika nerudo. Uri mwoyo vanhu vari kubudirira, makawana kana zviri munzira dzavo kuwana yakakwirira chinzvimbo muupenyu, uye unogona kuenda vakura vadyidzani. Sezvo uri kudaro chinyakare, unogona kushandisa munhu uyo ​​achaita zvimwe inonhuhwira saka ukama haasi kuwana stale.
Venus muna Aquarius: Unofanira mumwe munhu kwavo munhu pachavo, ane basa rakasiyana nemamwe unhu, uye machisi iwe azvakaita. Uchifarira kushamwaridzana munhu wokutanga, uye vanofunga kuti ushamwari ndiyo hwaro wakakwana rudo. Dambudziko iri, unogona kuva nguva zvakaoma mukupfuura ushamwari, saka imi munodazve mumwe munhu ndiani kuzarura imi mupfungwa uye auye nekuchiva.
Venus muna Pisces: Imi munodazve mumwe munhu anonzwisisa manzwiro ako zvinodiwa, achakudzivirira paunonzwa pangozi, uye haangazvidembi kushandisa iwe. Uchaita chinhu munhu waunoda, uye inogona nyore nyore nevanenge nekuda kuti. Kuva akadaro kudanana mwoyo, imi munodazve mumwe munhu zvikuru hunoshanda uye nenheyo. Uri mwoyo oumhizha mhando.